Midowga dowladaha hoose ee Puntland oo dhamaystiraya xeerka ururka Al-GAPL – Kalfadhi
Ururka ay ku midaysan yihiin dowlaha hoose ee Puntland ee la yiraahdo AlGAPL ayaa shaaciyay in ay bilaabeen dib u eegis lagu dhamaystirayo xeer hoosaadka ururkaas oo mudo laga shaqaynayay.
Dhawrkii cisho ee u dambeeyay waxaa Garowe ka socday kulan ay lahaayeen madaxda dowladaha hoose ee ilaa 10 degmo oo ka mid ah Puntland, si ay gacan uga geystaan dib habaynta xeerka oo la dhamaystirayo.
Duqa degmada Garowe oo ah gudoomiyaha xilligan ee ururka dowladaha hoose ayaa sheegay in xeerkaas uu muhiimad u leeyahay ururka ALGAPL.
Ururka dowladaha hoose ee dalka Holland ee loo soo gaabiyo VNG International ayaa kor u qaadista ka caawinaya dowladaha hoose ee Puntland, ururkaas ayaana hadda qayb ka ah qorshaha dhamaystirka iyo dib u eegista xeerka ururka dowladaha hoose Puntland.
Ururka VNG ayaa ka shaqeeyay barnaamij ay Gudoomiyaha dowladaha hoose ee Garowe iyo Boosaso bilihii ugu dambeeyay ay tababaro iyo waayo-aragnimo u doonteen dalka Holland. ALGAPL oo ah dallad ay ku wada jiraan inta badan dowladaha hoose ee Puntland ayaa la asaasay Shan san ka hor.
Dowladaha hoose ee Puntland badankood ayaa ku yimaada doorasho gole-yaal deegaan oo aan ahayn qof iyo cod. Meelaha aysan ka jirin golayaashaas ayaa madaxweynaha Puntland u magcaabaa gudoomiyaal ku meelgaar ah inta ay bulshada deegaankaasi isaga filnaanayso in ay gaarto doorasho gole-deegaan.
Xukuumadda Puntland oo meelmarisay miisaaniyadda dowladda ee toddobaadkan la horgeynayo golaha wakiillada